La wadaag, badbaadi oo ka hel jirridda.ly | Martech Zone
La wadaag, Keydso oo Raadi la jir ..
Talaado, Agoosto 16, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhowr usbuuc ka hor, waxaan u saxiixay Jir jir.ly. Qiyaas inaad isku dareyso Delicious ama Diigo iyo Twitter… taasi waa Trunk.ly! Asal ahaan, waxaad sameysatay dhammaan xisaabaadkaaga internetka Trunk.ly waxayna helayaan oo ay muujinayaan xiriir kasta oo aad dirto. Waan ku faraxsanahay wax kasta oo i badbaadiya daqiiqado yar maalintiiba kanina waa waqti-badbaadin weyn.
Markii aan u maleeyay in Delicious uu doonayo inuu albaabada u laabo (ka hor intaysan go'in), waxaan u beddelay dhammaan calaamadeysadaydii Diigo. Dhibaatadu, dabcan, waxay tahay inaan u calaamadeeyo, keydiyo oo aan wadaago xiriir kasta. Trunk.ly waxay qaadataa tallaabada calaamadeynta iyadoo si fudud loola socdo qoraaladeyda LinkedIn, Twitter, Facebook, Quora, Tumblr, Buuq, Instagram, Google Reader, RSS quudin iyo inbadan!
Laba astaamood oo dheeri ah ayaa cajiib ah… Trunk.ly ayaa fiiriya fiidiyowga iyo sawirrada xiriir kasta oo ku jira maqaalka u dhigma. Trunk.ly sidoo kale wuxuu ku ridayaa dhammaantood keyd macluumaad-tilmaameed oo aad u liita. Raadinta astaamahayga ayaa u fudud sida teeb garaynta "ka: douglaskarr" ereygeyga raadinta. Trunk.ly sidoo kale waxay bixisaa quudinta wadajirka ah ee xiriiriyeyaashaada haddii aad rabto inaad ku daabacdo meelo kale ama ay dadka waaweyni iska diiwaangeliyaan xiriiriyeyaashaada.
Haddii aadan qaddarin dhammaan buuqa iyo hadalada macno darrada ah ee warbaahinta bulshada, Trunk.ly sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u raacdo qof oo aad u hesho xiriiriyeyaasha ay wadaagaan. Taasi waxay jareysaa xoogaa buuq ah oo ay lahaan karaan dadka bulshada ee buuqa badan!
Natiijada Raadinta Google ee Tayada Tayada
Helitaanka Emailkaaga sanduuqa